Avereno averina ny angon-dranon-kapila alohan'ny hisian'ny famoahana azy - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>mg>Avereno averina ny angon-dranon-kapila alohan'ny hisian'ny famoahana azy
Avereno averina ny angon-dranon-kapila alohan'ny hisian'ny famoahana azy
Ahoana ny famerenana ny angon-drakitra disk? Inona avy ireo fomba mahazatra?
Alohan'ny fanoratana ny rakitra dia azo averina amin'ny fomba maro samihafa izy ireo.
Fomba iray: ny tsotra indrindra ary mivantana mivantana dia ny mampiasa rindrambaiko fanarenana data ho sitrana. Ankehitriny, tsotra ny fampandehanana ny rindrambaiko fanarenana ny data dia mamadika ny fandidiana sarotra izay efa tsy vita tamin'ny asa tsotra izay mety ho vita amin'ny tsindry totozy vitsivitsy.
Fomba 2: avereno ara-dalàna ny data. Mahazo ny rakitra very, fisarahana, sns ny matihanina amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny angona amin'ny sehatra hexadecimal. Ireo mpampiasa mahazatra dia afaka mividy serivisy fanarenana data ary avelao ny matihanina hanampy azy ireo hamerenana data.
Fomba 3: mitadiava orinasa fanarenana data matihanina. Raha misy tsy fahombiazana ara-batana lehibe amin'ny U disk ary ny rindrambaiko fanarenana ny angon-drakitra dia tsy mahazaka azy dia afaka mahita dokam-pahaizana momba ny fanarenana ny matihanina ianao raha te hahita vahaolana.
Tutorial 1: Ahoana ny fomba hamerenana ny angon-drakitra very nefa napetraka sy natambatra tamin'ny kapila U?
Ity torolalana ity dia mamaritra ny fomba fampiasana ny rindrambaiko Bplandatarecangana haka takelaka rakitra na voafafa tsy nahy na napetraka teo amin'ny kapila U. Ity torolàlana ity koa dia azo ampiharina amin'ny tranga izay tsy ahafahan'ny U disk mivoha ary hanosika hanao format.
PreFanarenana rafitra fanimbana rakitra
Nextവിസ്റ്റയെ വിൻഡോസ് 7 ലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ട ഡാറ്റ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ